Ammaanka maxkamadaha dalka oo sidii hore ka soo wanaagsanaadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadda degmada Malmö. Sawirle: Karin Olsson/Bendix/SR
Ammaanka maxkamadaha dalka oo sidii hore ka soo wanaagsanaadey
La daabacay fredag 17 januari 2014 kl 10.38
Lix maxkamdood oo ah kuwa degmooyinka ayaa muddo sannad iyo bar gudahood ah ku soo dhaqmaayey habka lagu kontaroolo adag ee ammaanka maxkamadaha. Qof walba maxkamadda soo galana wuxuu maraayey kontarool u dhigma kan dhaca garoomada dityaaradaha.
Maxkamadda degmada Malmö ayaan ka mid ah kuwa habkaan hirgeliyey. Waxaa kontarooladii halkaas laga sameeyey lagu helay ilaa 1153 walxood oo isugu jira kuwa halis ah iyo kuwo aan ku habboon maxkamadda. Walxahaas oo siddeed ka mid ahaayeen middiyo ay haysashadoodu dembi ku tahay xeerka haysashada middiyaha iyo waxyaalaha dadka lagu buufiyo oo ilmada ka keena.
2013 waxay kontarooladaas adagi ugu kaceen Hay’adda maxkamadaha kharash dheeraad ah oo gaaraya 11 milyan oo karoon. Kontarooladaasi ma ahan kuwo joogto ah ee saddexdii bilood mar ayaa la cusbooneysiiyaa. Carina Brzezinska oo kuxigeenka madaxa ammaanka ee Hay’adda maxkamadaha ayaa sidaan ka tiri:
- Maxkamadahaani waxay la soo kulmeen cabsi-gelin iyo handadaad. Waxayna ku imaan kartaa iyadoo dembi degaankaas ay maxkamaddu wax ka ogaato.
Maxkamadda Malmö ka sokow waxaa iyaguna kontarool dhab ah ee xagga ammaanka sameeya maxkamadaha Lund, Helsingborg, Göteborg, Södertälje iyo Blekinge. Bisha febraayo oo foodda nagu soo haysana maxkamadda Örebro ayaa hirgelin doonta kontaroolo la mid ah. dhammaan lixdaan maxkamadood waxay sheegeen in ammaankoodu aad u soo wanaagsanaadey.